राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी – Nepal Japan
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी
नेपाल जापान २ भाद्र १८:५४
सरकारले सिफारिश गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डरीले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यसबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रीहरुका अगाडि लाचार बनेको हो ?
राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, जसपाका तीन नयाँ मन्त्री
गृहमन्त्री खाण र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता
जसपा पनि मन्त्री फेर्दै, तीन मन्त्रीलाई बोलायो फिर्ता
नेपालमा ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’को नयाँ प्रजाति फेला
२० असार २१:०५
जब पीडितहरु नै आर्थिक प्रलोभनमा परेर बयान फेर्छन्
२० असार २०:४३
२० असार १९:४३
भारतीय दूताबासका सुरक्षाकर्मीले आफैंलाई गोली हाने
२० असार १८:५७
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक कालोपत्र गरेको दुई महिनामै भत्किन थाल्यो
२० असार १८:१०
१. विदेशका नेपाली विद्यालयमा जीवनोपयोगी विषय अङ्ग्रेजीमै पढाउन भट्टको माग
२. वामग्तीमा फोहर कम देखियो, कारण- वर्षा कि जनचेतना ?
३. रेडियो नेपाल डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवेश (फोटोहरुसहित)
४. नेपाली व्यवसायीलाई चीनको भिसाका लागि पहल गर्न आग्रह
५. बालेन र धनराजबीच नीति, योजना र बजेटका विषयमा छलफल
६. आफ्नै वनजंगलमा पाइने कटुससम्म किनेर खान्छन् नेपाली
७. “अब उहाँहरु प्रधानमन्त्री बनेर थप गुण लगाउनु पर्दैन”